Yenza ngokwezifiso i-WordPress Jetpack Shortcode Widths | Martech Zone
NgoLwesine, Agasti 29, 2013 NgoMgqibelo, Oktobha 24, 2015 Douglas Karr
Xa iWindowsPress ikhuphe ifayile ye- jetpack iplagi, bavule ukufakwa okuphakathi kweWindowsPress ukuya kuthi ga kwezinye izinto ezintle abazibandakanyayo kwisisombululo sabo. Nje ukuba wenze iplagi, wenza ukuba iitoni zempawu, kubandakanya shortcodes. Ngokuzenzekelayo, iWindowsPress ayimvumeli umbhali wakho ophakathi ukuba ongeze imithombo yeendaba kwimixholo yeposi okanye iphepha. Olu luphawu lokhuseleko kwaye lwenzelwe ukunciphisa amathuba okuphazamisa indawo yakho.
Nangona kunjalo, ngeekhowudi ezimfutshane, umsebenzisi wakho unokungena kwimidiya ngokulula. Umzekelo, ukushumeka ividiyo yeYouTube, akukho sidingo sokongeza iskripthi esisetiweyo-ubeke i-URL ekwabelwana ngayo kwividiyo kumhleli wokubhaliweyo. Umdibaniso weendlela ezimfutshane ezichonga umendo kwaye ubeke endaweni ye-URL ngeyona khowudi yevidiyo. Akukho ngxabano, akukho miba!
Ngaphandle kwenye. Usebenzisa iikhowudi ezimfutshane, ububanzi beendaba zakho ezigxunyekwe njengokungagqibeki. Ke u-YouTube unokwanda ngaphaya kobubanzi bomxholo wakho kwaye uphalaze ngecala lakho lecala- okanye iSlideshare ingathatha isiqingatha sendawo enokuthi ithathe. Ndichithe iiyure ezimbalwa ndizama ukuchonga indlela yokubhala ezinye izihluzi zokungagqibeki kububanzi bendlela nganye emfutshane. Ndivavanye iitoni zeeplagi ukubona ukuba ikhona na esele ikhona.
Kwaye ke ndiyifumene… uguquko oluncinci oluqaqambileyo olongezwa kwiWindowsPress kwi-API yabo. Ukuseta apho ungaseta khona ububanzi bomxholo kumaphepha akho kunye nezithuba:
ukuba (! iseti ($ umxholo_wendawo)) $ umxholo_width = 600;
Ngokukhawuleza xa ndibeka obu bubanzi kwifayile yemixholo yam imisebenzi.php, yonke imithombo yeendaba emfutshane enqamlezileyo yaphindiswa kwakhona. Ngelixa ndonwabile ukuba ithathe kuphela umgca wekhowudi, ndiyinto enkulu efraziweyo kangangokuba kuthathe ixesha elide ukuyifumana le nto. Okubangela umdla nangakumbi kukungabikho kolwenziwo olufumanekayo nge jetpack. Iikhowudi ezimfutshane, umzekelo, azinakukhubazeka- ziyasebenza ukuba iplagi inikwe amandla.
Kuya kuba kuhle, umzekelo, ukongeza ubuninzi ububanzi noseto lokuphakama ngqo kwi jetpack Useto lwekhowudi emfutshane. I-WordPress liqonga elingenambaliso, kodwa ngamanye amaxesha ukufumana isisombululo kunokuba yinto ephazamisayo!
tags: ukuphakamajetpackshortcodesububanzi besilayidiububanzi be vimeoububanziWordPressububanzi be-youtube